Micro Glass Zviyero
Isu tiri China hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori yeiyo diki magirazi mabhesi. Girazi maGirazi zvidiki zvidimbu zvegirazi izvo zvaishandiswa mumigwagwa yekumaka pendi uye inogara nzira yekumaka kuratidza mwenje kumashure kune mutyairi murima kana isina kunaka mamiriro ekunze - kugadzirisa kuchengetedzeka uye kuoneka. Magirazi egirazi anoita basa rakakosha mukuchengetedza mumugwagwa.
Yakajairwa Kupisa Road Yekumaka Paint
Isu tiri China hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori yemazuva ese tembiricha yekumaka pendi. Cold Solvent Mugwagwa wekumaka Paint chigadzirwa chakasarudzika-chine hushamwari, inoumbwa neModified Acrylic resin, mavara akaunganidzwa, zvinhu zvekuzadza uye nezvimwe zvakadaro inokodzera kunyorera kumigwagwa yebhitumini uye yekongiri. Inogona kuiswa zvinobudirira kune isina mweya kana yemhepo yekubatsira yekumwaya michina.